Color love အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
(day & night )Cream (7)g
Price- 7000 ks
အသားအရည်ပျက်ဆီးနေသူများအတွက် အမဲစက်ကင်းစင်၍ ဖြူဖွေးကြည်လင်တဲ့ အသားအရေ ကို တဖန်ပြန်လည် အသက်သွင်းပေးမယ့် 🎈🎈🎈
COLOR LOVE Day & Night Cream လေးကို
Day Cream လေးကို တစ်ပါတ်ကနေ ၁ လအတွင်း လိမ်းရုံနဲ့သင့်ရဲ့အပြစ်အနာဆာတွေ ပျောက်ကင်းပြီး
Side Effects မရှိ သုံးသူတိုင်း အကြိုက်တွေ့သွားတာမို့ မျက်နှာမှာ ရှိတဲ့ အမဲစက်၊တင်းတိတ်၊မှဲ့ခြောက်၊ဝက်ခြံ စတဲ့အပြစ်အနာအဆာများအတွက် အကောင်းဆုံးပြန်လည်ကုသပေးမယ့်
COLOR LOVE Day & Night Cream ပါ။🍅🍅
မျက်နှာသစ်ပြီိး မျက်နှာပေါ် day cream မိတ်ကပ်လေးကို အစက်လေးတို့ပြီး မိတ်ကပ်တွေလိုလိမ်းနိုင်ပါတယ်🍓🍓 မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ သနပ်ခါး ၊ Powder Two Way Cushion တွေ နဲ့လည်း ထပ်ပြီး လိမ်းလို့ရပါတယ်။
ညဘက်အိပ်စက်တဲ့အခါ မျက်နှာပေါ်မှာ ရှိတဲ့
Cell တွေက ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ပါတယ်
ဒါကြောင့် ညဘက်မှာပိုပြီး ထိရောက်ပါတယ်
COLOR LOVE ကထုတ်တဲ့ Night Cream က
Cell သေများကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အသားအရည်ကြည်လင်လှပ လာအောင် လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။💜💛
အိပ်ခါနီး မျက်နှာသစ်ပြီး ရေစင်အောင်သုတ်ပါ
Night Creamလေးကို အစက်ချပြီးအနှံ့ စိမ့်ဝင်အောင်လိမ်းပေးပါ ။🍑🍑
COLOR LOVE ပါ။🍏🍏
Day Night COLOR LOVE ရဲ့
Day ရော Night ရော လုံးဝအဆီမပြန်ဘူး
တင်းတိပ် မှဲ့ခြောက် ဝက်ခြံ ကို တကယ်နိုင်တယ်.
ချက်ချင်မဖြူဘူး တဖြေးဖြေး တစိမ့်စိမ့် နဲ့
အကြာကြီးစွဲစေတဲ့ Chemical မပါပါဘူး.
လုံးဝ မရှိပါဘူး side effect လည်း မရှိပါဘူးနော်💚💚
ပြင်သစ်နိုင်ငံက ထုတ်လုပ်ထားပြီး FDA လည်းရပြီသားဖြစ်လို့
ယုံကြည် စိတ်ချစွာနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါပြီရှင်
အမည်: Color love